Iindawo eziphambili zase-US zokugcina imali ngokuhlala ehotele ngaphezulu kwe-Airbnb
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Iindawo eziphambili zase-US zokugcina imali ngokuhlala ehotele ngaphezulu kwe-Airbnb
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Resorts • Shopping • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Iindawo eziphambili zase-US zokugcina imali ngokuhlala ehotele ngaphezulu kwe-Airbnb.
Iindawo ezirentwayo ngeeholide zibonelela ngeendawo zokuhlala ezikhethekileyo kunye namabali okubaliselwa, kwaye uvumele ababuki zindwendwe benze imali eyongezelelweyo ngelixa bephumile edolophini, kodwa ngaba isenjalo ngenene?
Umndilili wexabiso lobusuku begumbi lehotele eliphindwe kabini kufutshane neWaikiki Beach yi-74 yeedola nje, ngelixa ngokuhlala okufanayo kwe-Airbnb, kuya kuxabisa i-$271.
Ukulala kufutshane neGrand Teton National Park kuya kubiza nje i-$231 ehotele kodwa i-847 yeedola kwi-Airbnb.
Wonke umntu ufuna ikhefu kanye ngexesha, kwaye iiholide yindlela eqinisekileyo yokuphumla kunye nokwenza iinkumbulo ezintsha. Nangona kunjalo, iindleko zeholide zinokongeza ngaphambi kokuba uqonde kwaye uninzi lwethu lungathanda ukuchitha ixesha leziganeko eziguqula ubomi, izikhumbuzo, kunye nokutya okungaqhelekanga, endaweni yokuvuthela uhlahlo lwabiwo-mali kwigumbi.
Kunzima ukwazi ukuba loluphi uhlobo lwendawo yokuhlala olulungele uhlahlo lwabiwo-mali lwakho. Ekubeni i-Airbnb ifumaneka phantse kuzo zonke izixeko, ukusuka eLondon ukuya eHong Kong, kulula kunangaphambili ukurenta.
Iingcali zemizi-mveliso zihlalutye amaxabiso oluhlu lwe-Airbnb kunye neehotele kwiindawo ezingama-80 eziphambili zohambo, e-US nakwihlabathi liphela, ukubonisa ukuba yeyiphi eyona ndlela yokuhlala ilungele uhlahlo lwabiwo-mali.
1. Ulwandle lwaseWaikiki, EHawaii
Ipesenti yokugcina: 72.86%
Le paradesi imangalisayo yaseHawaii ibekwe ngaphakathi kwendawo yaseHonolulu kwiSiqithi saseOahu. Idume ngeelwandle zayo ezinesanti emhlophe kunye nolwandle oluzolileyo oluluhlaza, Waikiki itsala amawaka abakhenkethi minyaka le kwaye yeyona ndawo yeholide yesiqithi.
Nangona le ndawo ineendawo ezingaphezu kwama-300 ze-Airbnb, iihotele kunye neendawo ekuchithelwa kuzo iiholide zilawula unxweme. Amaxabiso abo ahluka kakhulu kwaye ukufikelela kubunewunewu obufana nephuli kunye ne-spa kunokuthetha ukuba ekugqibeleni uhlawula ngaphezulu.
Nangona kunjalo ixabiso eliqhelekileyo lobusuku begumbi lehotele eliphindwe kabini kufutshane Ulwandle lwaseWaikiki yi-$74 nje kuphela, ngelixa ukuhlala kwa-Airbnb okufanayo, kuya kuxabisa i-$271! Kwi-markup ye-72.9%, abahamba ngeeholide baya kuba ngcono ukuba bakhethe ukhetho lwendabuko.
2. Ipaki yeSizwe yaseGrand Teton, eWyoming
Ipesenti yokugcina: 72.79%
Xa ucinga ngeepaki zelizwe lase-United States, i-Yellowstone, iYosemite okanye iZiyon mhlawumbi ithi qatha engqondweni. Nangona kunjalo, i-landscape ekhangayo ngokulinganayo Ipaki yesizwe yaseGrand Teton itsala inyambalala yabakhenkethi abafuna iadventure.